Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Ho voakenda ireo mpitsara 260 ?
INTY SY NDAY: Ho voakenda ireo mpitsara 260 ?
Mbola hitohy ny fanesorana an’ireo mpiasam-panjakana matoatoa, hoy ny tompon’andraiki-panjakana. Ireo nambara fa matoatoa aloha ka hoe nananika ny 10.000 dia ireny efa niharan’ny fahatapahan-karama ireny tamin’ny faramparan’ny taona iny. Voalaza moa taty aoriana fa nisy fahadisoana teo amin’ny milina solosaina nitiliana an’ireo mpiasam-panjakana ka iny nidangana be iny ny isan’ireo tapaka karama, ary marobe tamin’izy ireo no ara-dalàna sy ara-pahamarinana, niasa tsy tapaka, nahavita araka ny tokony ho izy tsara ny asany, kanefa dia izy ireo indray no voasazy nasaina nikarakara ny antontan-taratasy manamarina an’izany mba hiverenan’ny karamany.
Ireo mpiasa eo ambany fiahian’ny fanjakana izay tena manao rainazy ka tena « matoatoa » aloha hatreto dia tsy mbola misy misongadina, na dia fantatry ny mpiasam-panjakana any anivon’ny ministera na any anatin’ny antokon-draharaha isan-tsokajiny any aza.
Izay indrindra no nahatonga ny filohan’ny Firaisan-kinan’ny Sendika eto Madagasikara (Ssm) izay sady Filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (Smm), Rtoa Ernaivo Faniry, nanamarika fa « tena tohanana ny foto-kevitra nofaritan’ny fanjakana hamongotra ny mpiasam-panjakana matoatoa, saingy mba tsy hiverenan‘ireny tranga tamin’ny fanapahana karama tamin’ny volana desambra teo ireny dia tsara raha miara-miasa amin’ny sendika, amin’ny mpiasam-panjakana isaka ny sampan-draharaha, sy amin’ny besinimaro ny tompon’andraikitra amin’ny fiaraha-mitily sy mitrandraka azy ireny ».
Etsy ankilany anefa dia lasa fisainana koa ity filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara ity, raha ny sehatra ny fitsarana manokana misy azy na ny tontolon’ny mpitsara izay fianakaviambe misy azy, no asian-teny. Ny ao amin’ny ministeran’ny Vola ao no voatondro-molotra aloha fa loharano nipoiran’ny olana.
Ara-tarehi-marika, hoy Rtoa Faniry Ernaivo, dia 920 no isanay mpitsara amperin’asa. Fantatra fa eo amin’ny 80 eo no vao hiditra hanatevin-daharana ny mpitsara amin’ity taona 2018 ity, raha 30 any ho any no handeha hisotro ronono. Ny dikan’izany dia tokony ho 970 any izany no ho isan’ny mpitsara handoavan’ny kitapom-panjakana vola, karaman’izy ireo. Tsy io 970 io anefa no nofaritana ao anatin’ny teti-bola 2018, hoy hatrany ity filohan’ny sendikan’ny mpitsara ity fa latsaka lavitr’io isa io. Any amin’ny amin’ny 710 any. Dia ahoana ny momba ireo 260 ambiny, hoy izy ? Hosokajiana ho « mpitsara matoatoa » ka hotapahina karama koa ve, hoy ny baraingo napetrany ?
Mampiahiahy izany tranga izany, hoy ihany Rtoa Ernaivo Faniry, ka takiana ny hisian’ny fandinihana malaky ny toe-draharaha fa toa mandeha ho azy toy ny lakan-jejo ny fitantanana ny raharaham-panjakana eto.